Maintenance indostrialy - Ikkaro
firosoana >> Fikolokoloana indostrialy
El Ny fanovana ny fikojakojana no mety ho karazana fikojakojana tsy voadinika sy tsy dia jerena loatra, saingy tsy latsa-danja noho izany ny tetik'asa sy ny drafitra fikojakojana anay ao anatin'ny orinasa maniry ny hiasa amin'ny fikojakojana amin'ny fomba matihanina.
Tsaroantsika ny tsy fitovizany Karazana fikojakojana misy izany ary izay efa noresahintsika sy teknika sasany toa ny RCM
Ny foto-kevitry ny fanovana ny fikojakojana misy hetsika tsy mahazatra an'ny departemanta fikojakojana fa mifameno izy ireo ary tsy maintsy jerentsika sy iasanay izany.
El Ny TPM dia misy ny fampifangaroana eo amin'ny fikojakojana sy ny famokarana. Amin'ny TPM dia omena andraikitra ny mpikarakara amin'ny fikojakojana. Izany dia mitaky filàna manokana, toy ny fampiofanana manokana an'ny mpandraharaha ary koa ny fanekeny ny andraikitra voalaza. Satria raha apetrantsika tsotra izao fa ny mpiasa dia tsy mahatsapa ho tafiditra sy tsy te handray anjara amin'ilay maodely dia tsy handeha tsara izany.
Ny dinamika toy ny an'ny Faribolana kalitao ao anatin'ny famokarana orinasa iray dia natsangana tamin'ny fikojakojana izy ireo.
Amin'ny toe-karena ankehitriny dia ilaina ny mifaninana mba ho tafavoaka velona amin'ny tsena masiaka. Izany dia mitaky ny famongorana ireo lesoka famokarana. Ny famokarana ivelan'ny fandeferana na ny fiafarana ilaina dia tsy avela, ary koa ny tsy fahampiana ateraky ny fitaovana simba.
Miaraka amin'ny automatisation sy ny fampidirana robot (Factory automation) ny fahaiza-manao ara-teknika ilaina dia nampitomboina ireo mpiasan'ny tsipika, fa indrindra indrindra amin'ny fikojakojana. Betsaka ny mpiasa voaofana ara-teknika no ilaina.
El RCM (Fikojakojana mifantoka amin'ny fahamendrehana), na ny fikojakojana mifantoka amin'ny fahamendrehana, dia teknika mikendry ny fampandrosoana drafitra iray ao fikojakojana ny orinasa indostrialy. Izany dia mamela ny fahazoana andian-tombony mihoatra ny teknika hafa, fahazoana tombony mba hialana amin'ny fanoloana ampahany matetika kokoa.
Tamin'ny voalohany dia nampiharina ny RCM ny indostrian'ny fiaramanidina, izay lafo kokoa ireo vidin'ny fanoloana ireo, izay niteraka olana ara-toekarena lehibe ho an'ireo orinasa ao amin'ity sehatra ity. Taty aoriana dia nitatra tamin'ny sehatry ny indostria io noho ny fahombiazana lehibe nananany tamin'io sehatra io.
El Fikolokoloana mialoha Izy io dia iray izay mifototra amin'ny fizahana tsindraindray hamaritana ny satan'ny sy ny fiasan'ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa. Ireo teknisianina natokana ho an'ity karazana fikojakojana indostrialy ity dia mila manana fahalalana lalindalina momba ny fitaovana izay anaovany famakafakana, sy hahafantarana andiana anton-javatra na fiovana mety hisy fiantraikany amin'ireo rafitra ireo.
ny ejemplo, ny asa fikojakojana dia tokony hahalala ny mari-pana na ny maripanan'ny maripana fandeferana amin'ny rafitra iray, ny tsindry, ny hovitrovitra ekena fatratra, ny isan'ireo tsingerina ekeny alohan'ny hisarahana, ora fiasana mandritra ny ora maro, hahafantarana ny tsy fahombiazana mety hitranga, sns. Ny zava-drehetra dia tsy maintsy nofaritana tamin'ny alàlan'ny fampahalalana avy amin'ny mpanamboatra fitaovana na, tsy nahomby izany, tamin'ny alàlan'ny fandalinana sy famakafakana.
El Fikolokoloana Io no tanterahina rehefa efa niseho ny tsy fahombiazana. Matetika io no fahita indrindra amin'ny ankamaroan'ny indostria, indrindra ireo kely. Saingy tsy midika izany fa izy no tsara indrindra, na dia ho an'ireo mpamokatra kely na atrikasa kely aza, ny vidiny na ny fahasarotan'ireo maodely fisorohana sy mialoha dia mety hahatonga ny fanitsiana ho mendrika. Na izany aza, na dia kely aza, ny fatiantoka noho ny tsy fiasana dia tsy ho lehibe toa an'ireo orinasa lehibe.
Ao anatin'ity maodely ity dia tsy ny fanamboarana ny simba na ny fanovana ny faritra tsy mandeha, ny maso na ny fandalinana hafa dia matetika atao ihany koa hamaritana ny satan'ny rafitra, ny fanadiovana ary ny asa fikojakojana hafa raha ilaina, toy ny fanosorana, sns.
El Fikojakojana misoroka somary be pitsiny io, ary misy ny fidirana an-tsehatra hisorohana ny tsy fahombiazana. Amin'ity tranga ity, mifototra amin'ny fahamendrehan'ny fitaovana izy ireo, ary miankina amin'ny tranga, ny asa fikojakojana indostrialy dia hatao mandritra ny fotoana maromaro na kely kokoa.
Ny tena tanjona dia mitahiry fitaovana sy fotodrafitrasa. Ho fanampin'izany, toy ilay efa naminavina, dia mazàna atao amin'ny alàlan'ny milina ihany koa izy io, noho izany dia tsy midika izany hoe mampihena ny famokarana ary mitazona ny fahazoana avo izay tadiavina tokoa amin'ireto tontolo iainana ireto izay tena lafo ny fotoana tsy miasa.
Anisan'ny asa fikolokoloana fisorohana, miainga amin'ny fanadiovana tsotra ny fitaovana izany ka miasa tsara, ny fanovana ireo faritra efa tonta alohan'ny tsy ahombiazany, ny fanovana ny menaka fanosotra sns, arakaraka ny tolo-kevitry ny mpanamboatra ny masinina, na ny hevitry ny manam-pahaizana. Noho izany, manakana ny tsy fahombiazana ihany koa izy io alohan'ny hitrangan'izany, toy ilay faminaniana mialoha ihany.
Raha mamaky an'ity ianao dia mila fampahalalana bebe kokoa. aza adino ireo lohahevitra lehibe momba ny fikojakojana ny indostria The drafitra fikojakojana, fitaovana CMMS ary ny Karazana fikojakojana.
Amin'izao fotoana izao, ny Ny fanaovana informatika ny lahasa fikojakojana dia midika fiakarana avo lenta mifanohitra amin'ny fomba fiasa taloha. Tsy mamela fotsiny ny fifehezana tsara kokoa, fa manamora ny fisorohana ny mety tsy fahombiazana sy ny fanaraha-maso ireo masontsivana mety hisy fiatraikany amin'ny masinina na ny fametrahana azy.
CMMS no mijoro Fitantanana fikolokoloana fanampiana amin'ny solosaina. Amin'ny teny anglisy dia mifanaraka amin'ny fanafohezana CMMS (Rafitra fitantanana Maintenance momba ny solosaina). Amin'ny ankapobeny dia rindrambaiko na programa izay manome andiana serivisy ho an'ny fikolokoloana orinasa.
El fikojakojana indostrialy Izy io dia fomba fanao ilaina mba hahazoana antoka fa ny fitaovana rehetra iasanao dia ao anatin'ny toe-javatra tsara, miantoka ny famokarana sy ny kalitaon'ny famokarana tsara amin'ny fotoana rehetra. Ny politikam-pikojakojana tsara ihany no ahafahana mihena ny tsy fahombiazana ary azo ovainaina ny fahasimbana mety hitranga.
Inona no atao hoe fikojakojana indostrialy
Ny fikojakojana ny indostria dia fomba iray izay mampivondrona andian- fenitra sy teknika hitahiry ireo milina sy fotodrafitrasa amin'ny karazana indostria na atrikasa. Mba hahatratrarana ny fiarovana ireo masinina sy fitaovana ampiasaina, ary hampihenana ny fahatapahana lehibe, mila manana politika tsara ianao.